AMISOM oo ka guuraya mid ka mid ah fariisimahoodii ugu weynaa ee Muqdisho
Ciidamada AMISOM oo Kufsi u geestay Haween Soomaaliyeed oo kaalmo u doontay Xarumahooda
Warbixintan cusub ee kasoo baxday hay’ada HRW ayaa lagu cadeeyay shaacana looga qaaday xadgudubyo xaga jinsiga ah iyo kufsi ciidamada midowga Africa kasocda ee AMISOM ay kageystaan gudaha Somalia. Iyado warbixintan ciwaan looga dhigay “Sida Raggani ay noogu awood sheegtaan”.
Taliyaha AMISOM oo ka Hadlay Al-shabaab iyo Howlgallada ka socda Somalia
Taliyaha AMISOM Jen. Silas Ntigurirwa oo haatan ku sugan magaalada Bujumbura ee dalka Burundi ayaa sheegay in haddii geerida Amiirka Al-shabaab ay dhab noqoto ay taasi Qaaradda Afrika kaga dhignaan doonto guul weyn.
AMISOM oo Shaacisay in 75% ay ku Guuleysteen Howlgalladeeda Soomaaliya
Ciidamada ururka Midowga Afrika (AMISOM) ayaa sheegtay inay hadda 75% ay ku guuleysteen howlgalkooda Somalia tan iyo bishii February 2013-kii.
Taliyihii Ciidamada AMISOM oo lagu badalay mid cusub
Kadib Munaasabad aad u ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen Madax ka tirsan Dowladda Soomaaliya, Safiirada Wadamada Ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya iyo Madax ka tirsan Qaramada Midoobay iyo Mdowga Yurub ayaa maanta wax ay ka dhacday Xarunta Ciidamada AMISOM ee Xalane.